ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ခြင်း၊ (ဖတ်ဖြစ်အောင်ဖတ်ပါ) | Danya Wadi
Posted by danyawadi on February 8, 2016 in ကျန်းမာရေး
မိမိ မဖြစ်လောက်သေးပေမယ့် အသက်ကြီးသူတွေ ဘာကြောင့် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ် သေဆုံးကြရပါသလဲ.ဆိုတာလေးသိရအောင်
>>> ၁၉၀၀ ပြည့်နှစ် ၀န်းကျင်လောက်က Thomas Vills “ သောမတ်စ် ဗီးစ် ” ဆိုတဲ့ ကောင်လေးတစ်ယောက်သူအရမ်းချ စ်တဲ့ သူ့အဖိုး…သူ့ရှေ့မှာ ဦးနှောက်သွေးကြော
ဘာမှ မသိသေးတဲ့ ကလေးလေးဆိုပေမဲ့ သူ့အရမ်းချစ်တဲ့ အဖိုးဖြေးဖြေးလဲကျသေဆုံးသွားပုံကို မျက်စိထဲက မထွက်ခဲ့ဘူး..
ဒီလိုနဲ့ နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာ “ သောမတ်စ် ဗီးလ် ” ဟာ ဆရာဝန်ဖြစ်လာခဲ့တယ်..
သူငယ်ငယ်ကတည်းက မျက်စိရှေ့တင် လဲကျသေဆုံးသွားတဲ့ အဖိုးအဖြစ်ကို
ဘာကြောင့် ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ရတာလဲ လို့ သူ့လေ့လာခဲ့တယ်…..
မလေ့လာရင်သာနေမယ်..လေ့လာရင် အရာရာ သိလာရတာပါပဲ….
တစ်ခါတစ်လေ ကြီးမားတဲ့ အပြောင်းအလဲတွေဟာ မထင်မှတ်တဲ့ နေရာတွေက အစပြုတတ်ပါတယ်…..
မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်ပြီးခဲ့ရတဲ့ လူတွေ အများကြီးပါ..သူတို့ဟာ အဓိကအားဖြင့် ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးမှာ ဖြစ်တတ်ပါသလဲ…
“ အလွန်ဒေါသထွက် ၊ ရန်ဖြစ်နေချိန်ကလွဲလို့ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ် သေဆုံးသူအများစုဟာ
အိမ်သာက အထွက်မှာ မူးပြီးလဲကျ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်တယ်. .လို့တွေ့ရမှာပါ.
ဒီလိုပါပဲ…သောမတ်စ်ဗီးလ် လဲတွေ့ရှိခဲ့တယ်.. ”
သူ့အဖိုးကလဲ အိမ်သာက အထွက်မှာလဲကျ သေဆုံးသွားခဲ့တာလေ..
အိမ်သာတတ်သူ၏ ဒူးက၁၅၀ ဒီဂရီကျော် ကွေးပြီး ထိုင်ရုံသာမက လူဝိတ်ကပါ ဖိမိထားတော့ ခန္ဓာကိုယ်က သွေးကြောတွေ ပိတ်မိနေတယ်..
ဒီအချိန်မှာ အိမ်သာတတ်ပြီးလို့ ရုတ်တရက်ထလိုက်တော့ ကွေးနေတဲ့ဒူးဟာ..
ရုတ်တရက်သွေးကြောကိုဖွင့်ပေးလိုက်သလို ဖြစ်ပြီး ဦးနှောက်သွေးကြောကိုဆောင့်တိုး စေတယ်..
ဒါကြောင့် အိမ်သာက အထွက်မှာ လူတွေ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်တာလို့… သူတင်ပြတယ်..
ထိုင်ကမုတ်ခွက် တွေကို ပြောင်းသုံးဖို့ သူတီထွင်ခဲ့တယ်..
ထိုင်ကမုတ်ခွက် တွေ အပြောင်းအလဲရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုကလဲ
၇၀ % သော လူတွေ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်မှုကိုကာကွယ်နိုင်ခဲ့တယ်..
ပြင်သစ် ၊ ဆွီဒင် ၊ ဂျာမနီ ၊ အမေရိကန် ၊ဟော်လန်နိုင်ငံတွေမှာ ထိုင်ကမုတ်ခွက် သုံးပြီးကတည်းက ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်သူ ၈၅ % လျော့ချနိုင်ခဲ့တယ်..
အင်္ဂလန်အပါအ၀င် တခြားနိုင်ငံတွေမှာ၇၀ % လျော့ချနိုင်ခဲ့တယ်..
ဖွံဖြိုးပြီး အာရှနိုင်ငံများမှာ ၆၀ % ကျော်လျော့ချနိုင်ခဲ့တယ်..
အာဖရိကတိုက်မှာတော့ ဦးနှောက်သွေးကြောပြတ်သူ တဖုတ်ဖုတ်ပါပဲ..
အားလုံး ဘေးကင်းကြပါစေ…။ ။
Credit to မိုးမင်း
ယောကျာ်းခွန်အားတိုးဆေး(Tawan) အကြောင်းကို ဒီအောက်က Link မှာ အပြည့်အစုံ ဖတ်ကြည့်နိုင်ကြပါတယ်။
← ဒီချုပ်ကိုယ်စားလှယ်များ၏ လစာ၂၅% မှ လစဉ် ပါတီ ရံပုံငွေ ၉၇၅သိန်း ရရှိမည်
ဥပဒေနဲ့အညီ အိမ်ခြံမြေ ၀ယ်ယူခြင်း →